Nyere Nwa Gị Aka Ka Ọ Kpachara Anya n’Ịntanet | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
ISIOKWU TETA! A Gịnị Ka E Ji Ama Ezigbo Enyi?
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Nyere Nwa Gị Aka Ka Ọ Kpachara Anya n’Ịntanet
THE BIBLE'S VIEWPOINT Ịtụgharị Uche
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Otú Unu Ga-esi Ghara Ịna-Emefusị Ego
THE BIBLE'S VIEWPOINT Ọnwụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
Ndị nta akụkọ na-ekwukarị na e nwere ndị na-eji Ịntanet akpa arụ. Ụfọdụ n’ime ndị ahụ na-ezigara ndị ọzọ ozi na-emenye ha ụjọ, ma ọ bụ rata ndị ha na ha ga-enwe mmekọahụ. Ha na-egwukwa ndị mmadụ wayo. N’ihi ya, ọ bụrụ na obi erughị gị ala na nwa gị na-aga n’Ịntanet, ụta adịghị gị.
Ma, i nwere ike inyere nwa gị aka ka ọ kpachara anya n’Ịntanet. Ka anyị buru ụzọ kwuo ihe i kwesịrị ịma gbasara Ịntanet.
Ụmụaka na-eji ekwentị aga n’Ịntanet. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na kọmputa unu dị n’ebe ọ ga-abụ onye mepee ya, mmadụ niile ana-ahụ ihe onye ahụ na-eme. Ma, ọ bụrụ na nwa gị nwere ekwentị e ji aga Ịntanet, ọ ga na-aga ya mgbe ọ bụla ọ chọrọ, ma ị̀ nọ ya ma ị nọghị ya.
Na ndị mmadụ na-enwe ihe mberede ụgbọala apụtaghị na ịnya ụgbọala adịghị mma. Otú ahụ ka ọ dị ịga n’Ịntanet. Ọ bụghị na ọ dịghị mma, kama nwa gị kwesịrị ịkpachara anya otú ahụ onye na-anya ụgbọala kwesịrị ịkpachara anya
Ụfọdụ ụmụaka na-anọte aka n’Ịntanet. Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na itoolu kwuru, sị: “Anaghị m ejideli onwe m. Ọ na-abụ m gbanye kọmputa ka m jiri nkeji ise gụọ iimel m, mụ esizi ya lelewe fim ruo ọtụtụ awa.”
Ụmụaka nwere ike tinye ihe ha na-ekwesịghị itinye n’Ịntanet. Ndị ajọ mmadụ na-eji foto ụmụaka na-etinye n’Ịntanet na ihe ndị ọzọ ha na-edenye amata ma ebe ha bi ma ebe ha na-aga akwụkwọ ma mgbe mmadụ na-agaghị anọ n’ụlọ ha.
Ụfọdụ ụmụaka amaghị nsogbu ihe ha tinyere n’Ịntanet nwere ike ịkpatara ha. Ihe ọ bụla e tinyere n’Ịntanet anaghị apụ apụ. E nwere ike ịhụ ihe na-adịghị mma mmadụ dere ma ọ bụ foto na-adịghị mma onye ahụ tinyere mgbe ọtụtụ afọ gachara. Dị ka ihe atụ, o nwere ike ịbụ mgbe onye chọrọ iwe mmadụ n’ọrụ na-achọ ịmata ụdị onye ọ chọrọ iwe n’ọrụ bụ, ka ọ ga-ahụ ihe ndị na-adịghị mma onye ahụ tinyere n’Ịntanet.
N’agbanyeghị ihe ndị a niile, cheta na mmadụ ịga n’Ịntanet abụghị ihe ọjọọ. Kama, nsogbu na-apụta ma ọ bụrụ na onye na-aga ya akpacharaghị anya.
Kụziere nwa gị ihe ndị ka mkpa nakwa otú ọ ga-esi jiri oge ya na-eme ihe bara uru. Onye na-eto eto kwesịrị ịmụta na ya kwesịrị ibu ụzọ na-eme ihe ndị ka mkpa. Ọ bụ otu n’ime ihe ndị ga-enyere ya aka ịghọ mmadụ. Nwatakịrị na ndị ezinụlọ ha ịkparịta ụka, ịrụ ihe e nyere ha rụọ n’ụlọ akwụkwọ na ịrụ ọrụ dị n’ụlọ dị mkpa karịa igbu oge n’Ịntanet. Ọ bụrụ na nwa gị na-anọte aka n’Ịntanet, gwa ya mgbe ọ ga-eji na-aga ya na mgbe ọ ga-eji na-apụta. I nwekwara ike itinye ihe ga na-echetara ya na oge o kwesịrị imechi ya eruola.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Filipaị 1:10.
Kụziere nwa gị ka ọ na-echebara foto na ihe ọ na-ede echiche tupu o zipụ ha. Kụziere ya na tupu o zipụ ihe ọ bụla, ya jụọ onwe ya, sị: M dee ihe a, è nwere onye ọ ga-emebi obi? Onye hụ foto a m chọrọ itinye, olee ụdị onye ọ ga-asị na m bụ? M̀ ga-achọ ka papa m na mama m na ndị ọzọ torola eto hụ foto a ma ọ bụ ihe a m dere? Olee ụdị onye ha ga-asị na m bụ ma ha hụ ya? Olee ụdị anya m ga na-ele onye tinyere ụdị foto a ma ọ bụ dee ụdị ihe a?—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 10:23.
Kụziere nwa gị ihe mere ọ ga-eji na-akpachara anya. E nweghị otú ị ga-esi na-ahụ ihe niile nwa gị na-eme kwa ụbọchị. Ma, ọrụ gị abụghị ịna-agwa ya ihe ọ ga-eme na ihe ọ na-agaghị eme kama ọ bụ ka i nyere ya aka ‘ịzụ ikike nghọta ya azụ’ ka ọ ‘mata ihe dị iche n’ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi.’ (Ndị Hibru 5:14) N’ihi ya, kama ịna-enye ya iwu ma ọ bụ na-agwa ya ahụhụ ị ga-ata ya ma o nupụrụ gị isi, nyere ya aka ka o jiri aka ya mata ihe dị mma na ihe na-adịghị mma. Olee ụdị mmadụ ọ chọrọ ịbụ? Olee ụdị àgwà ọ chọrọ ka e jiri mara ya? Nyere ya aka ka ọ mụta ịna-eme ihe dị mma, ya sọgodị ya ya bụrụ na gị na ya anọghị.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 3:21.
“Ụmụaka ma gbasara nkà na ụzụ ma ndị mụrụ ha ma gbasara otú ihe si aga ná ndụ”
Onye na-achọ ihe n’Ịntanet dị ka onye na-anya ụgbọala. N’agbanyeghị na onye ahụ ma anya ụgbọala, o kwesịrị ịkpachara anya. Ị̀ hụlanụ ihe mere ndị nne na nna ji kwesị inyere ụmụ ha aka? Ọ bụ ya mere otu nwoke ihe gbasara Ịntanet doro anya, aha ya bụ Parry Aftab, ji kwuo, sị: “Ụmụaka ma gbasara nkà na ụzụ ma ndị mụrụ ha ma gbasara otú ihe si aga ná ndụ.”
“Ime omume rụrụ arụ dị ka egwuregwu n’anya onye nzuzu, ma amamihe dịịrị onye nwere nghọta.”—Ilu 10:23.
“Chekwaa ezi amamihe na ikike iche echiche.”—Ilu 3:21.
N’akwụkwọ Kenneth Ginsburg na Susan FitzGerald dere, ha sịrị: “O nwere àgwà ndị ga-enyere nwa gị aka izere nsogbu ma ọ malite ịga n’Ịntanet. O kwesịrị ịdị obiọma, na-ejide onwe ya ma na-enwere ndị ọzọ ndidi. O kwesịrị ịna-akpa àgwà ndị a tupu ya agawa n’Ịntanet.”
Lee katuun a ka ị mata otú ị ga-esi zere nsogbu ma ị nọrọ n’ebe a na-emeta ndị enyi n’Ịntanet.
Chọpụta otú ozi i zigaara mmadụ nwere ike isi mee ka gị na ya see, na otú o nwere ike isi mee ka i nwee aha ọjọọ.